Ubugcisa beMarvel kunye neDC eyenziwe kwiglasi engcolileyo yoyilo lukaVan orton | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubugcisa beMarvel kunye neDC eyenziwe kwiglasi engcolileyo yoyilo lukaVan orton
Iqela loyilo elenziwe ngamawele azinze eTutín, e-Itali. Ngubani igama lomnumzana Uyilo lweVan orton, Yenza bonke ubugcisa beengcinga ngokubetha iglasi enechaphaza ngohlobo lweefowusta zeemovie. Apho bayithatha ngokwedijithali imifanekiso besebenzisa abalinganiswa be icon y Imiboniso bhanyabhanya nganye. Uyilo lukaVan orton luthatha indawo yabangcwele kunye nemifanekiso yezonqulo ngenkcubeko ye pop njenge terminator, Umqhuli y UJack Burton, ubume babo bobugcisa bemveli babenza bangakholeki.
Kule nqaku sikulethela i Ubugcisa beMarvel kunye neDC zenziwe ngamawele abazalwana, iiklasikhi zohlobo lwenzululwazi, intshukumo kunye nefantasy, apho uVan Orton engeza into enomdla kwimfuzo yoyilo, apho kubonakala ngathi ziyaphindeka Iincwadi zokubala, ngaphezulu kweglasi enombala weklasikhi ekhumbuza iYurophu yamathedrali amakhulu. Olu khetho loyilo longeza kuthotho 'lokuthamba kunye nostalgic mood, kwaye uwahlule ngokufanelekileyo (nangona ipowusta kaBatman umzekelo inezinto ezifanayo ezifanayo nomsebenzi wabazobi baseBritane abadumileyo uGilbert & George). Indibaniselwano yemigca emnyama ebhityileyo netyebileyo (ukuphindaphinda ukukhokela okusetyenziselwa ukukhusela iglasi enamabala) inoluhlu olubanzi lwe I-prism enemibala, Esiza nomgangatho owahlukileyo nokahlukileyo onokufezekiswa kuphela kuyilo lwedijithali.
Unako ukuthenga iiposta zakho (zinemibala okanye hayi) nguVan Orton Uyilo apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubugcisa beMarvel kunye neDC eyenziwe kwiglasi engcolileyo yoyilo lukaVan orton
I-Trixel yi-Instagram yobugcisa be-pixel
Izinto zemihla ngemihla ziguqulwa zangama-surreal